ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းတွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှု၏အရေးပါမှု - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုကုသရန်သီအိုရီဆိုင်ရာအမြင်များနှင့်သက်ရောက်မှုများ (၂၀၀၉) - Your Brain On Porn
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကုသမှုအတွက်သီအိုရီအမြင်များနှင့်သက်ရောက်မှု (2009): ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု၏အရေးပါမှု
J ကိုလိင် Res ။ 2009 Mar-Jun;46(2-3):216-32. doi: 10.1080/00224490902747701.
Kingston DA1, Malamuth မိုင်, Fedoroff P ကို, မာရှယ် WL.
ဤဆောင်းပါးသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ၏လူမှုရေးစိတ်ထားများ၊ လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာမဟုတ်သောရာဇ ၀ တ်မှုနှစ်ခုလုံးတွင်လိင်ဆိုင်ရာရန်လိုသောအပြုအမူများအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ပတ်သက်သောစာပေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်အဓိကအားမြင့်မားနေသောယောက်ျားသည်, လိင်ရန်လိုရလဒ်များများအတွက်အန္တရာယ်အချက်နိုင်ပါတယ်အချက်များအပြန်အလှန်, မျိုးစုံ၏အခြေအနေတွင်ဆန်းစစ်သောအခါ, တွေ့ရှိချက်များကြောင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဖေါ်ပြခြင်းအတွက်စမ်းသပ်နှင့် nonexperimental လေ့လာမှုများတလွှားနှင့်မတူညီသောလူဦးရေကိုဖြတ်ပြီးအလွန်အမင်းတသမတ်တည်းဖြစ်ကြောင်းကောက်ချက်ချ သည်အခြားအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အတူအဘယ်သူမကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်ပေါ်မှာ။